मदिरा र पुरुषको यौन अनुभव « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
मान्छेलाई यी दुबैप्रति अधिक चासो चाहि छ । गुगलमा धेरैले के खोजेको पाइन्छ भने, ‘के मदिराले यौन जीवनलाई उत्कर्षमा पु¥याउँछ रु यदि त्यसो हो भने कुन चाहि मदिरा यौनका लागि उचित हुन्छ रु के मदिरा पिएपछि पुरुषले लामो समयसम्म यौन क्रियामा भाग लिन सक्छन् ? के महिलाले मदिरा पिएपछि यौनमा अरु आनन्द लिन सक्छन् ?
बढी मात्रामा मदिरा पिएपछि पुरुषले उस्तै सक्रियताका साथ र उहि गतिका साथ यौन क्रियामा भाग लिन सक्दैनन् । त्यसो त नियमित मात्रामा मदिरा सेवनले क्रोनिक इरेक्टाइल डिसफंसन जस्ता समस्या ल्याउँछ, जसले यौन जीवनमा पनि असर गर्छ । मदिरा पिएपछि पुरुषहरुमा यौन रुची त जाग्छ, तर सक्रियतासाथ यौन क्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन् ।
मदिरा पिएको झोंकमा गरिने यौन क्रियामा कतिपय सावधानी अपनाइदैन । त्यसैले यस्ता यौन क्रिया असुरक्षित हुन्छ । धेरै मदिरा पिएर दम्पतीले सुरक्षित, संयमित ढंगले यौन क्रियामा सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । त्यसैले मदिरा र यौनलाई आपसमा जोड्नु उनीहरुका निम्ति घातक हुनसक्छ । वेहोशीमा होइन, पूर्ण होसमा सचेतापूर्वक यौनको आनन्द उठाउनु नै उचित हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २६, २०७७ शुक्रबार ९ : ०० बजे